Rabies (ခွေးရူးပြန်ရောဂါ) : ရောဂါလက္ခဏာတွေ၊ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ ကုသမှုတွေအကြောင်း Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Rabies (ခွေးရူးပြန်ရောဂါ)
Rabies (ခွေးရူးပြန်ရောဂါ) ကဘာလဲ။
ခွေးရူးပြန်ရောဂါဆိုတာ Rabies အမည်ရှိ ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ခွေးရူးပြန်ခြင်း ရောဂါပိုး ကူးစက်ထားတဲ့ ရှဉ့်၊လင်းနို့၊မြေခွေးနဲ့ လေလွင့်ခွေး (စွန့်ပစ်ခံ)တွေ ကိုက်ခံရခြင်းဖြင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ခွေးရူးပြန်ခြင်း လက္ခဏာတွေ စပြလာပြီး ကုသမှုမခံလျှင် ထိုသူသည် သေဖို့များပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ခွေးရူးပြန်ခြင်း ဖြစ်နေပြီလို့ သံသယရှိနေလျှင် အရေးပေါ် ကုသမှုခံယူ သင့်ပါတယ်။
Rabies (ခွေးရူးပြန်ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဝေးလံတဲ့အရပ်ဒေသတွေမှာ နေတဲ့သူတွေမှာ အကိုက်ခံရလျှင် အရေပေါ်ထိုးရန် ကာကွယ်ဆေး မရရှိနိုင်ကြပါဘူး။ ခွေးရူးပြန်ခြင်း ဟာအသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်သော်လည်း ၁၅နှစ်အောက် ကလေးတွေ၊ ခွေးရူးပြန် virus ထိတွေ့မှုများတဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်သူတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အဖြစ်များနိုင်တဲ့ သူတွေထဲမှာ ခွေးရူးပြန် virus ကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်း မရှိတဲ့ ဒေသမှာနေတဲ့ ကလေးတွေ၊ တောတွင်းဝေးလံတဲ့ ဒေသသို့ ခရီးသွားသူတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
Rabies (ခွေးရူးပြန်ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ခွေးရူးပြန်ဗိုင်းရပ်စ် စဝင်ပြီး ပထမဆုံးလက္ခဏာပြဖို့ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၃၅ ရက်ကနေ ၆၅ရက်ထိကြာတတ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးလက္ခဏာတွေက တုပ်ကွေးနဲ့တူပါတယ်။ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
တခြားလက္ခဏာတွေကတော့ ကိုက်ခံရတဲ့နေရာမှာ နာခြင်း သို့ ထုံခြင်းကို ၃ ရက် ၄ ရက်လောက် ခံရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ အာရုံကြောစနစ်ကို ထိခိုက်လာတဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ ကဏာမငြိမ်မှုတွေ၊ကြမ်းတမ်းတဲ့ အပြုအမူတွေ နဲ့ ငြိမ်သက်နေတဲ့ အမူအရာတွေ ပြလာတတ်ပါတယ်။
ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်မှုတွေ၊ ကြွက်တက်တာတွေနှင့် အကြောသေတာတွေလဲ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာပဲ ရေကြောက်ခြင်း (hydrophobia) လဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကံဆိုးစွာနဲ့ပဲ ခွေးရူးပြန်ခြင်း ကိုအချိန်မှီမကုနိုင်ခဲ့လျှင် လက္ခဏာတွေပြပြီး ၄ရက်မြောက်နဲ့၇ရက်မြောက်လောက်မှာ သတိမေ့ခြင်း၊တက်ခြင်း နှင့် နောက်ဆုံး သေတဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာမပါဝင်တဲ့ အခြားသောလက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ဆီမှာ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုများရှိနေမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့် ပါတယ်။
တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်ကိုက်မိရင် ကိုယ့်အိမ်မွေးတိရာစ္ဆာန်ဖြစ်နေရင်တောင် ဆရာဝန်ဆီ အမြန်ဆုံး သွားပြသင့်ပါတယ်။ ကိုက်ခံရတဲ့ ဒဏ်ရာနဲ့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး သင်နဲ့ ဆရာဝန်က ခွေးရူးပြန်ခြင်း ကာကွယ်ရန် ကုသမှုခံယူသင့် မသင့် ဆုံးဖြတ်ရပါမယ်။
ကိုက်ခံရတာ မသေချာရင်တောင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြကြည့်သင့်ပါတယ်။
သင့်ဆီမှာ အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုခုများရှိနေမယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခု ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှုဟာ မတူညီနိုင်ပါဘူး။ သင့်အခြေအနေ အတွက် ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Rabies (ခွေးရူးပြန်ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ခွေးရူးပြန်ခြင်း ကိုဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစားကတော့ ရောဂါပိုးရျိတဲ့ တိရာစ္ဆာန်ကောင်ရဲ့ သွားရေမှာရှိတဲ့ rhinovirus ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးရှိတဲ့ တိရာစ္ဆာန်ဟာ တခြားတိရာစ္ဆာန် သို့ လူကို ကိုက်ခြင်းဖြင့် ရောဂါကို ပြန့်ပွားစေပါတယ်။
တချို့ရှားပါးကိစ္စအနေနဲ့ ရောဂါပိုးရှိနေတဲ့ သွားရေဟာ အနာ သို့ မျက်လုံး၊ပါးစပ်တို့ရဲ့ mucous membrane ထဲဝင်ပြီးလဲ ခွေးရူးပြန်ခြင်း ကူးတတ်ပါတယ်။ ဒါက ရောဂါပိုးရှိတဲ့ တိရာစ္ဆာန်က သင့်ရဲ့ အနာကို လာလျက်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Rabies (ခွေးရူးပြန်ရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ခွေးရူးပြန်ခြင်း အဖြစ်များတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အာဖရိက နှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ နေထိုင်ခြင်း၊ခရီးသွားခြင်း
ခွေးရူးပြန်ခြင်း ရှိနေနိုင်တဲ့ တောရိုင်းတွေနဲ့ ထိတွေ့နိုင်တဲ့ အပြုအမူတွေဖြစ်တဲ့ လင်းနို့ရှိတဲ့ ဂူများသို့သွားခြင်း သို့ တောရိုင်းများမလာနိုင်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုမရှိပဲ တောတွင်း စခန်းချခြင်း
ခွေးရူးပြန်ခြင်း ပိုးရှိတဲ့ ဓတ်ခွဲခန်းမှာ အလုပ်လုပ်ခြင်း
ခွေးရူးပြန်ခြင်း ပိုး ဦးနှောက်ကို အမြန်ဆုံးရောက်နိုင်တဲ့ ခေါင်း၊လည်ပင်း နှင့် လက်တွေမှာ ဒဏ်ရာများရှိခြင်း
Rabies (ခွေးရူးပြန်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်ကို ကိုက်တဲ့ တိရာစ္ဆာန်ကို ဖမ်းပြီး ခွေးရူးပြန်ခြင်း ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ကိုက်ခံရတဲ့ အချိန်မှာ သင့်ဆီကို ခွေးရူးပြန်ခြင်း ပိုးဝင်သွားလားဆိုတာ သိနိုင်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်က သံသယရှိတယ်ဆိုလျှင် ကာကွယ်ဖို့ ကုသမှုပြုရန် တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
Rabies (ခွေးရူးပြန်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ခွေးရူးပြန်ခြင်း ပိုးရှိတဲ့ တိရာစ္ဆာန်ကိုက်ခံရပြီဆိုလျှင် အကိုက်ခံရတဲ့နေရာကို ဆပ်ပြာ၊ ရေနဲ့ ပိုးသေစေတဲ့ Povidone-iodine တွေနဲ့ သေချာဆေးကြောပါ။ ပြီးနောက် ခွေးရူးပြန်ခြင်း ပိုးကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဆေးအဆင့်ဆင့်ထိုးရပါတယ်။
ခွေးရူးပြန်ခြင်း ကာကွယ်ဆေး ၂ မျိုးရှိပါတယ်။
တစ်မျိုးမှာ ချက်ချင်း အာနိသင်ပေးနိုင်တဲ့ ခွေးရူးပြန်ခြင်း immunoglobulin ပါရှိပြီး ကိုက်ခံရတဲ့ ဒဏ်ရာ အနီးထိုးရတဲ့ ဆေးမျိုးဖြစ်ပြီး နောက်တစ်မျိုးမှာ အနည်းဆုံး ၄ ချက်ပါဝင်ပြီး ၁၄ ရက်ကြာထိုးရတဲ့ ဆေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယတစ်မျိုးက လက်မောင်းမှာထိုးရပြီး သင့်ခန္ဓါကိုယ်မှာ ခွေးရူးပြန်ခြင်း virus အားမှတ်သားစေပြီး ခန္ဓါကိုယ်ကနေ ပြန်တိုက်ထုတ်စေပါတယ်။ အကိုက်ခံရတဲ့ တိရာစ္ဆာန်ကို ဖမ်းမိပြီးနောက် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ခွေးရူးပြန်ခြင်း ပိုးမတွေ့ဘူးဆိုလျှင် ဒုတိယ ကာကွယ်ဆေးမျိုးထိုးစရာ မလိုပါဘူး။ ဆက်လက်သိရှိလိုသောအချက်အလက်များအတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲံ အမြဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက ခွေးရူးပြန်ခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် ခွေးရူးပြန်ခြင်း ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
• သင့် ခွေးရူးပြန်ခြင်း ရောဂါအခြေအနေတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုရှိမရှိ သိနိုင်ရန် ဆရာဝန်နဲ့ ရက်ချိန်းပုံမှန်ပြပါ။
• ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်တွေကို လိုက်နာပါ။
• သင့်ရဲ့ သွားတွေ၊သွားပွတ်တံတွေနဲ့ သွားကြားထိုးတံတွေကို ဂရုစိုက်ပြီး သွားဆရာဝန်နဲ့လည်း ပုံမှန်ပြပါ။
• စားသောက်ပုံပြောင်းလဲပါ၊ ဆားသိပ်မစားပါနဲ့။
• ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းထားပါ။
• Caffeine ဓါတ်ကိုလျှော့ပါ။
2012. Print edition. Page 253.
Porter, R. S., Kaplan, J. L., Homeier, B. P., & Albert, R. K. (2009). The Merck manual home health handbook. Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Page
Rabies. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/en/. Accessed September 25, 2015.
Rabies. http://www.cdc.gov/rabies/symptoms/index.html. Accessed September 25,2015.
Rabies. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rabies/basics/tests-diagnosis/con-20019900. Accessed September 25, 2015.Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier,
Rabies. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rabies/basics/tests-diagnosis/con-20019900. Accessed September 25, 2015.